Fifanoheran-dresaka any Malezia: Fampielezan-tsaho ve ny lahatsoratra Facebook miresaka coronavirus? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2020 5:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Esperanto , Ελληνικά, русский, Français, English
Pikantsarin'i Wan Noor Hayati Wan Alias ​​avy amin'ny lahatsary fanadihadiana nataon'ny Kini TV. Loharano: YouTube
Mety hiatrika sazy an-tranomaizina roa taona ny mpisera Facebook iray avy any Malezia namoaka ilay votoaty nampiady hevitra mifandraika amin'ny tantaran'ny coronavirus (2019-nCoV na Covid-19) raha toa izy ka meloka tamin'ny fanitsakitsahana ny andininy faha 505 (b) amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana ao amin'ny firenena, izay mandrara ny famoahana sy ny fampielezana tsaho ‘mampatahotra na manaitra ny vahoaka’.
Voampanga tamin'ny famoahana lahatsoratra Facebook miisa telo tamin'ny 26 Janoary i Wan Noor Hayati Wan Alias fa mamoaka tsaho sy votoaty manavakavaka mifandraika amin'ny fiparitahana manerantany amin'ity valan'aretina ity. Tsy niaiky ny helony i Hayati tamin'ny 5 Febroary, rehefa niseho teo anoloan'ny fitsarana tany Kuala Lumpur, renivohitry ny firenena izy.
Vondrona fampitam-baovao maro no nitaky ny fanalana ny fiampangana azy ka namaritra ny fihetsiky ny manampahefana ho famaizana.
Manasarotra ity raharaha ity ny maha-mpanao gazety nahazo loka an'i i Hayati sy ny fanoratany ho an'ny Berita Harian sy ny New Straits Times. Izy ihany koa no mpitam-bola ankapobeny ao amin'ny Sendikà Nasionalin'ny Mpanao Gazety ao amin'ny saikanosin'i Malezia (NUJM).
Na dia tsy niresaka tranga manokana aza ny Lehiben'ny Fampanoavana Tan Sri Tommy Thomas dia namoaka fanambarana ny biraony tamin'ny 5 Febroary izay nanazava ny antony mahatonga ny governemanta hanasazy ireo manaparitaka fandisoam-baovao momba io viriosy io:
Tsy azo avela maina fotsiny amin'izao ny mandainga momba ny fiandohan'ny aretina sy ny halaliny sy ny halehibeny satria manimba ny filaminam-bahoaka. Mifanohitra amin'ny fahamendrehana iraisan'ny rehetra izay iresahana betsaka ao amin'ny fiainam-pirenentsika ity fanelezana tsaho ity. Iankinan'ny ain-dehibe tokoa manko ny fitokisana ny Aterineto amin'ny maha-loharanom-baovao sy torohay voalohany azy.
Niaro an'i Hayati ny NUJM ary nandrisika ny governemanta mba tsy hametra ny fanehoan-kevitra malalaka:
Mino izahay fa manan-jo hanambara ny ahiahiny amin'ny vahoaka izy amin'ny maha mpanao gazety azy… vahoaka izay tsy nampahafantarin'ny governemanta loatra momba ny fihanaky ny coronavirus.
Nilaza ny sasany fa tsy mitombina ny fiarovana ataon'ny NUJM raha namaritra ny lahatsorany ho tsy tompon'andraikitra kosa ny hafa.
Ho an'ny Foiben'ny Asa Fanaovan-gazety Tsy Miankina kosa dia nampahatsiahy ny manampahefana izy ireo fa azo atao ny manohitra ny fanambarana izay tsy maneho taratra ny vaovao nomen'ny sampan-draharahan'ny governemanta:
Manantitrantitra izahay fa ny fanenjehana ara-pitsarana dia ampahany fotsiny ihany amin'ireo fomba marobe azo ampiasaina iadiana amin'ny fandisoam-baovao sy ireo fanambaràna mitarika any amin'ny tsy izy. Ao anatin'ny setriny mendrika sy arakaraka ny olana ny fananana fantsom-baovao mahomby sy mivelatra avy amin'ny governemanta sy ny fampitam-baovao, ny fahazoana (vaovao) mora takarina sy azo itokisana ho an'ny vahoaka mba hanamarinana ny vaovao ary ny fanesorana ireo (votoaty) fitaovana mahadiso vaovao avy amin'ny fampihatra tambajotra sosialy.
2 / Hevitro manokana dia somary manaiky aho fa ilaina ny famerana sasantsasany amin'ny fotoanan'ny krizy, fa tsy ara-draro,u ,u mitondra olona any amin'ny Fitsarana Famaizana. Tsy ilaina ny ho amin'ny alalan'ny famaizana noho izany amin'ity raharaha ity no hametrahana ny famerana.
Tao amin'ny tohivakana Twitter, nandinika ilay olana ilay manam-pahaizan'ny fampitam-baovao Maleziana Gayathry Venkiteswaran ary naneho ny ahiahiny momba ny valinteny ‘tsy voalanjalanja’ avy amin'ny manampahefana
… Mila mijery ny fiampangana amin'ny tranga midadasika ihany koa isika: moa ve ireo rehetra izay nosamborina tena nanimba zavatra ary moa ve izy ireo tena nahavita nitaona olona hihetsika na nanakorontana ? Angamba ny hisian'ny fifampitokisana no zava-dehibe kokoa noho ny fikasana hisambotra olona mizara ny heviny, na dia azo heverina aza ny sasany amin'izy ireo fa tsy tompon'andraikitra. Aoka isika tsy ho maika loatra hanaiky ny fandefasana olona any am-ponja rehefa misy ny olana momba ny fahalalaham-pitenenana izay mety hitera-doza kokoa, ary ilaintsika ny mitady vahaolana ho an'ireo.
Nandoa onitra solofonja i Hayati ary hiverina indray manoloana ny fitsarana amin'ny 11 Martsa.
Zahao ato amin'ny Global Voices ny fitantarana manokana momba ny fiantraikan'ny coronavirus any Wuhan.